Ọ bụ ihe na-aga nke ọma maka Lamine, 44, onye bụbu onye na-anabata ya na onye nrụpụta weebụ na-eme, onye na-enweghị afọ ojuju inweta diplọma ya tupu oge ọkọchị, na-eme ajụjụ ọnụ ugbu a iji họrọ ụlọ ọrụ ọ ga-achụso. nke, ọ na-ekweta na ịdị umeala n'obi nile, ọ maghị ihe ọ bụla ruo n'oge na-adịbeghị anya. Zute.
"Mmepe weebụ, maka m, bụ Chinese n'ezie", Lamine kwuru mgbe a jụrụ ya gbasara ihe ndị ọ chọrọ mgbe ọ na-abanye na nkuzi ifocop. Ọ na-ekpori ndụ taa, ma ọ dịghị ezochi ya iji soro ọzụzụ ahụ wee nweta diplọma ya, ọ ghaghị ịkwado, "Kwụsị ịda mba", nabata ịghara ịmụta ihe niile ozugbo, na-akụda mgbe ụfọdụ ... ma ọ bụghị ogologo oge n'ihi na otu nkuzi "Onye na-ahapụbeghị" (sic), agaraghị anụ ya otu ahụ.
N'ịbụ onye nwere ọgụgụ isi, Lamine aghaghị ịgbachitere nhọpụta ya wee gafee ọtụtụ ule iji jikọta ọzụzụ ifocop ya. "Ekpebisiri m ike ịgbaso ọzụzụ a, mkpali m meriri akara ahụ, a nabatara m, ọ bụghị ịdọ aka ná ntị na ọ ga-esi ike", ọ na-akọwapụta. Ọ gaghị enwe nkụda mmụọ, ọ ga-eweghachikwa ọsọ ọsọ nke ọmụmụ ihe dị elu ọ mere otu afọ gara aga.
Lamine: site na họtel gaa na mmepe webụ, na ntụkwasị obi Ọnwa Iri 24, 2021Tranquillus
GỤỌ June 29, 2020 Uniformation na-enye ndị otu ya usoro mgbake iji kwado gị na mbido ọrụ gị, A na-achịkọta ngwa ọrụ iji kwado mmemme mmemme ọmụmụ ma kwụsị nsogbu ahụ.
gara agaMounir: "Ọzụzụ a na-anọchi anya m ụdị nke springboard"
-esonụDimitri: "Site na ịghọ onye nrụpụta webụ, achọpụtara m asụsụ ọhụrụ"